जो बढी धर्मात्मा, त्यही बढी सङ्कटमा किन ? « Loktantrapost
जो बढी धर्मात्मा, त्यही बढी सङ्कटमा किन ?
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १७:०६
धर्म के हो ? केलाई धर्म मान्ने ? के गर्दा धर्म हुन्छ ? धर्म किन गर्ने ? धर्मको परिभाषा के हो ? यस्ता विषयमा अनन्त बहस भएको छ, हुन्छ र भइरहन्छ । म बहस गर्ने र रौँ चिरा छलफल गरेर अर्थ लगाउनेभन्दा धर्म र धार्मिक विषयमा समाजमा रहेको साधारण बुझाई जे छ त्यसैका आधारमा केही चर्चा गर्न प्रयास गरेको छु ।
समाजमा रहेको धर्मको परिभाषा वा बुझाई भनेको भगवान, ईश्वर वा यस्तै कुनै नाममा आस्था जनाउनु हो । श्रद्धा गर्नु हो । धार्मिक मानिसले भनेको मान्नु हो । धार्मिक मानिस कसलाई भन्ने ? यो विषयमा पनि अनेक बहस, छलफल हुन्छ नै । यहाँ समाजको साधारण बुझाईमा धार्मिक मानिस तिनलाई भनिन्छ जो सधैँ भगवानको पूजा गर्छन् । मन्दिर जान्छन् । भगवानको दर्शनका लागि हुनसम्मको प्रयास गर्छन् । भगवानको नाममा वर्त बस्ने, पूजापाठ गर्ने, भगवान रिसाउलान् भनेर सधैँ डराउने, देउतालाई खुसी पार्न सधँै प्रयास गर्ने, देउतालाई भेटी, मिठाई, फलपूmल, अन्न, नैवेद आदि चढाउने र निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक सम्मान गर्ने मानिसलाई धर्मात्मा मानेको देखिन्छ ।
म सानो छँदा मेरी आमाले खेतबारीमा फलेको सिजन अनुसारको पहिलो फल देउताका नाममा चढाएको देखेको थिएँ । बारीमा फलेका मध्ये काँक्रा, सन्तोला टपक्क टिपेर खान मिल्थ्यो । तर, आमाले देउतालाई चढाएपछि मात्र खाने गरेकाले नचढाइकन खान पाइँदैन थियो । आमाले लिने ब्रत त कति हो कति । बुबा झन् धेरै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो । मेरा बुवाआमा, मामामाइजु, काकाकाकी सबैजनाले भगवानमा गहिरो आस्था राख्ने गरेको पाएको छु । तर, व्यक्तिगत र परिवारिक जीवनमा उनीहरुले दुखः बाहेक केही पाए जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुको जीवनमा निकै दुःख हुँदा पनि भगवानप्रतिको विश्वास डगमगाएको कहिल्यै देखिन ।
मैले विद्यालयको औपचारिक शिक्षा माध्यमिक तहसम्मको मात्र लिन पाएँ । त्यसपछि जीवनले जीविकाको खोजी र परिवारको जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दाखोज्दै दिनरात कसरी बिते पत्तै भएन । समाज, राजनीति, भूगोल, व्यक्ति, व्यक्तिका चित्तबृत्त आदिको अध्ययन एउटा यस्तो गहन विषय रहेछ त्यो नजानी पनि नहुने जानेर पनि नसकिने । यस्तैमा मैले राजनीतिमा लागेर अलिअलि दर्शनको अध्ययन गर्न पुगेछु । मैले पढेको दर्शनमा भगवानको अस्तित्व मानिसले बनाएको हो भन्ने पढेँ । तर, सबै प्रकारका धर्मको मान्यता त भगवानले यो दुनियाँको सृष्टि गरेका हुन् भन्ने छ । म अहिले रनभुल्लमा छु । फेरि पनि कुनै भगवानले आफ्नो मर्जीले यो दुनियाँको रचना गरेका हुन् भन्नेमा अभैm विश्वास छैन । प्रकृतिको अस्तित्व र सन्तुलन, प्रकृतिमा भएका पदार्थको मिश्रण र त्यसबाट हुने परिवर्तनले दुनियाँ चलायमान छ भन्ने मेरो बुझाई छ । यो मेरो विश्वास मात्रै हो । सत्य हो कि होइन म किटान गरेर भन्ने र प्रमाणित गर्न सक्ने हैसियतमा छैन ।
तर, दुनियाँमा ईश्वर, भगवान, अल्ला, इशु आदिले नै यो दुनियाँको सृष्टि गरेका हुन् र उनीहरुकै इच्छा अनुसार मात्रै सबै कुरा भइराखेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुको संख्या ठूलो छ । त्यही भएर होला मानिसको ठूलो जमात आज पनि भगवानको ढोकामा भगवानप्रति भक्तिभाव दर्शाउन, आस्था व्यक्त गर्न, भगवानलाई मनपर्ने कुरा र काम गर्न अर्थात भगवानलाई खुसी पार्न थरिथरिका काम गर्ने गरेका छन् । भगवानलाई खुसी पार्नुमा स्वार्थ पनि जोडिएको छ । किनकि भगवानको द्वार अगाडि गएर मानिस अन्तरमनले नमन गरेर केही न केही मागिरहेको नै हुन्छ ।
मैले सन् २००८ पछिका दिनमा अलि बढी नै घुमघामको अवसर पाएँ । नेपालकै जनकपुर र काठमाडौँको पशुपतिनाथमा त्योभन्दा अगाडि नै पुगेको थिएँ । पछि भारतको विशेषगरी दक्षिणी भागका धेरै मन्दिरको अवलोकन र भ्रमण गर्ने अवसर जुर्यो । अझ पटकपटक जुर्यो भन्दा पनि हुन्छ । नेपालकै पूर्वको पाथिभरा, मध्यको मनकामना जस्ता धार्मिकस्थलको भ्रमण गरेको छु । अरु धार्मिक मेलाहरु पनि समय समयमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
यस्ता अनेकन धार्मिक क्षेत्रको यात्रामा मैले देखेका मानिस सामान्य अवस्थाका छन् । त्यहाँ पुग्ने ९० प्रतिशतभन्दा भढी मानिसको स्वास्थ्य अवस्था त्यति राम्रो देखिँदैन । लवाई सामान्य छ । यतिबाट बुभ्mन सकिन्छ तिनको आम्दानी खासै राम्रो छैन । तिनको आवास साधारण हुनुपर्छ । राम्रो शिक्षा पाएका छैनन् । पोषणयुक्त भोजन छैन, शुद्ध पिउने पानीको सबैमा पहुँच छैन । छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक थिचोमिचो र अन्याय सहन बाध्य छन् । राज्यको पहुँचबाट अभैm टाढा बसेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी र यस्तै समस्याका कारण उनीहरुको जीवनमा समस्याको चाङ लागेको छ । जीवन कष्टकर छ । तर, भगवानप्रतिको आस्था यिनीहरुमै बढी देखेको छु ।
जुन मन्दिरमा गए पनि भक्तको भिड भेटिन्छ । तर, भक्तको अवस्था र स्तर नियाल्दा प्रायः समानता भेटिन्छ । मेरो चासो किन यस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै हो । म सबैलाई उस्तै त देख्दिन तर मन्दिरमा पुगेका मध्ये धेरै मानिस माग्न जान्छन् भन्ने मेरो बुझाई छ । माग्नेहरु धन दौलत, सन्तान, पति, पत्नी आदि माग्छन् । सन्तानको सद्वुद्धि, सुस्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, सम्बृद्धि आदि माग्छन् । कार्य सिद्धि र कार्य सफलताको माग सबैले नै गर्छन् होला । किनकि उनीहरुसँग त्यसको अभाव हुने गर्छ । धेरै धन भएकाहरु पनि मन्दिरमा जाने गर्छन् । सायद उनीहरु अभैm धेरै धन माग्छन् । विद्यार्थी मन्दिरमा गएर ज्ञान होइन पास हुने बरदान माग्छन् । किनकि उनीहरुलाई पास भएपछि सबैथोक हुन्छ भन्ने भ्रम हुन्छ । हुन त भगवानसँग मागेर पाइन्छ भन्ने पनि भ्रम नै हो । तर, जवसम्म यो खाले भ्रममा विश्वास हुन्छ तबसम्म माग्ने गर्दा पनि मनमा मैले मागेको छु भन्ने कारणले सायद केही फाइदा नै हुन्छ । भगवानसँग माग्नेहरु शसर्त माग्ने गर्छन् । मेरी आमाले पूर्वकी प्रशिद्ध भगवती पाथिभरासँग मलाई माग्नु भएको थियो रे । आमाको माग उहाँका लागि एकदमै ठुलो रहेछ तर शर्त एकदमै सामान्य रहेछ । छोरो जन्मेपछि देखाउन ल्याउँछु भन्नु भएको रहेछ । संयोग मेरो जन्मभयो । म सानो छँदा आमाले बुबा, मामामाइजू र मामाका छोरीहरुसँग मलाई लिएर पाथिभरा माताको दर्शन गराउन लानुभएको अलिअलि याद छ । म कति वर्षको थिएँ त्यो थाहा छैन । तर, पाथीभरामा मानिसहरु भाकल पुरा गर्न बोको घिसार्दै गएको याद छ । डाँडामा हिउँ परेर सेताम्य भएको याद छ । यस्तो भाकल चल्तीको चलन हो । मेरा बाआमा, काकाकाकी, मामामाइजूको समयमा अहिलेको भन्दा धेरै भाकल गर्ने, देउताप्रति अघाध विश्वास गर्ने, देउतासँग गरेका सबै बाचा जसरी पनि पूरा गरी छाडने गर्थे । अहिलेका मानिस देउतासँग त्यस्तो डराएको जस्तो लाग्दैन । तर, उतिबेला देउता रिसाए भने दुखः दिन्छन् भन्ने डर व्यापक थियो । त्यसैले पनि देउतालाई खुसी पार्न कुनै कसर बाँकी राखिँदैन थियो । तर, देउता खुसी भएर मेरा आफन्तजनलाई सुख दिएको मैले खासै देख्न पाइन । अहिले देउताले बिगार्छन् कि भन्ने डर हराउँदै गएको जस्तो लाग्छ । तर, भगवानले आफुले चिताएको र मागेको दिन्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ प्रवल छ ।
भगवानप्रतिको विश्वास र आस्था हाम्रो संस्कृति बनेको छ । यो सीमासम्म त ठिकै थियो तर भगवानले दिएपछि मात्रै पाइन्छ, भगवानले नदिए केही पाइँदैन भन्ने विश्वासका कारण मानिसले चुपचाप अन्याय सहेको, जालीझेलीका कुरा पत्याउने गरेको, आफ्नो दुःखका लागि आफ्नै भाग्यलाई दोष दिएको, आफ्नो भाग्य राम्रो बनाइदिन बारम्वार भगवानसँग गिडगिडाउने गरेको पाएको छु । हुनत ‘भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दोएर अडिदैन’ भन्ने उखान पनि चल्तीमा नै थियो । यसको अर्थ मानिसलाई कर्म गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हो । तर, कर्म गर्नभन्दा भगवानसँग माग्न सजिलो भएकाले होला मानिसले निशङ्कोच मागिरहे र मागिरहेका छन् । जसजसले भगवानसँग माग्ने गरिरहे तिनले राम्ररी सिकेर, विधिप्रविधि सहित, विश्वासका साथ कर्म गर्न चुकेको देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक जटिलताहरु बुझ्न नसकेको पाएको छु ।
अहिले पनि केही अल्छी र विन्दास स्वभावका विद्यार्थी समयमा राम्ररी ध्यान दिएर पढ्दैनन् । तर, उनीहरुलाई परीक्षामा पास गर्नै पर्ने सामाजिक र परिवारिक दबावका कारण परीक्षाको अघिपछि भगवानसँग गएर गिडगिडाउँछन्, भाकल गर्छन् । मेरो विचारमा भाकल एक प्रकारको ब्ल्याकमेल हो । मलाई यो गरिदेउ म तिमीलाई त्यो गरिदिन्छु भनेको हो । भगवानसँग गरिने यस्तो सम्झौता सधैँ एक पक्षीय हुन्छ । यो सम्झौतामा भगवानले के भने माग्नेलाई पनि थाहा हुँदैन । संयोगले पूरा भएछ भने मैले मागेर पाएँ भन्ने सन्तोष मात्रै हो । मेरी आमालाई जस्तै ।